"नेपालकै यस्तो ठाउँ जहाँ दलितलाई कुकुर / कुकुर्नी भनेर बोलाउँछन् " - MONGOL KHABAR
"नेपालकै यस्तो ठाउँ जहाँ दलितलाई कुकुर / कुकुर्नी भनेर बोलाउँछन् "
June 18, 2019 by onlinenews
काठमाडौ । मान्छेको नाम कुकुर-कुकुर्नी भनेकाे सुन्दा सबै लाई एकछिन अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मानुपर्दैन। यही कुकुर र कुकुर्नी नामबाट चिनिन्छन। ढोरपाटन नगरपालिका वडा ८ बोबाङ्ग गाउँका कुकुर्नी कामी र कुकुरे कामी अहिले पनि। आमा कुकुर्नी र बाबु कुकुरे भनेर गाउँलेहरुले बोलाउँदा छोराछोरीलाई कति पनि अचम्म लाग्दैन।
छोराछोरीलाई अचम्म र दुख लागेर के गर्नु? उनीहरुलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन दिइएको नागरिकतामै कुकुरे र कुकुर्नी नाम लेखिए पछि! गाउँ घरमा विवाह, चाडपर्व सबै मेला पर्वहरुमा उनीहरुलाई यही नामबाट बोलाउँदा आफुहरुको नाम अरुले थाहा पाउँछन् कि भनेर निकै दुख लाग्ने गरेको कुकुर्नी कामीले बताइन। उनलाई सबै भन्दा चिन्ता त छोराछोरीको नागरिकतामा बाबु आमाको नाम लेख्दा कुकुर्नी भनेर लेखिनेमा छ ।
माइती घरमा बाबु आमाले मायाले काली नाम राखेर बोलाए पनि न्वारनको नाम कुकुर्नी नभएको उनले बताइन। पछि गाउँ घरमा झगडा हुँदा कुकुर्नीजस्ती भनेर भन्दा पछिसम्म सबैले कुकुर्नी नामबाट बोलाउन थालेको उनले बताइन। गाउँमै चुनावको बेला भोट हाल्ने निुहँमा आफ्नो नाम कुकुर्नी कामी भनेर लेखेर आएपछि सबैले बोलाउने नाम नै कुकुर्नी भएछ। त्यही नामबाट नागरिकता लिन अनकनाउँदा समेत सरकारी कर्मचारीका कारिन्दाहरुले कुकुर्नी नामबाट नागरिकता दिएको उनको भनाई छ।
नागरिकतामै उनीहरुको नाम कुकुर र कुकुर्नी लेखेर दलित समुदायका मानिसलाई यतिसम्म हिंसा गरेको देखियो। यहाँका दलितहरुको नागरिकता हेर्दा र सार्वजनिक स्थानमा समेत यही नामबाट बोलाइन्छ। मान्छे भएर पनि पशुको जस्तो नामको दर्जा पाउनु र त्यही नामबाट गाउँभरी चिनिनु असाध्यै पीडा हुने गरेको कुकुरे कामीले बताए। ‘हामीलाई पशुको जस्तो नामले बोलाउँदा साह्रै नराम्रो लाग्छ , यो नाम परिर्वतन गर्नुपर्यो।
"गाउँभरी नै यस्तै नाम"
यो बाग्लुङ्गको ढोरपाटन नगरपालिकाका दलितहरुले भोग्दै आएको हिंसाको घटना हो। सुन्दा नै पीडा बोध हुने नाम नियोजित रुपमा राखिएको दलित समुदायको बुझाइ छ। उनीहरुको मात्रै होइन कि यहाँका अन्य दलित समुदायको नाम मशान, लाटी, ख्याउँते, ढल्ले, आँखे, आँखी, काले, काली र भुन्टे जस्ता नाम नागरिकतामा छन। बोबाङ्ग गाउँमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको ठुलो बाहुल्य रहेको छ।
जहाँ ७० प्रतिशत भन्दा बढि दलित समुदाय बसोबास गर्छन। त्यसै ठाउँमा न्युन संख्यामा रहेका अरु समुदायले विभेद गर्छन। बिशेषतः त्यस्ता नाम राखी दिने ज्योतिष र त्यही नाम नागरिकतामा लेखि दिने तत्कालिन गाविस सचिवहरु पीडक भएको वर्तमान पिढीँको भनाई छ।
छोराछोरीको चिन्ता अहिलेका युवापुस्ताहरु आधुनिक नाम राख्न चान्छन। सबैले मन पराउने नाम आफ्नो र आफ्नो परिवारको होस भन्नेमा छन।
किन कि स्कूलदेखि जे गर्दा पनि नागरिकता आवश्यकता पर्दा सहज नागरिकता देखाउन समेत गाह्रो लाग्ने गरेको आशिष विकले बताए। आफ्नो नागरिकतामा समेत बाबु आमाको नाम राख्दा पीडाबोध हुने नाम लेख्नुपर्ने हुँदा निकै दुख लागेको उनले बताए। ढोरपाटन जनवादी विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर विश्वकर्मा भन्छन ‘त्यस्ता गाली गलौजका नाम राखि दिनेहरुको खोजी हुनुपर्छ र त्यस्ता नागरिकताहरु शुद्धिकरण गरिनुपर्छ।
नत्र के ती कुकुरे कुकुर्नी लेखिएका व्यक्तिहरुका छोरा, नाती, पलाती सम्म कुकुर कुकुर्नीका सन्तान भई रहनु पर्ने? रुप-रंगका आधारमा नाम यस्तो नाम जुराई दिने यहाँका हिजोका सामन्ती ज्योतिषीहरु हुन। त्यसले गर्दा अहिले त हामी ब्राम्हण ज्योतिषकोमा जान छाड्यौ। हाम्रै जातका जैसी बनाएका छौं । दलितका जैसी नाम गंगे कामी हो। ब्राम्हण ज्योतिषी कहाँ जाने हो भने अहिले पनि त्यस्तै नाम राखी दिन्छन।
सच्याउन सकिन्छ नागरिकता: सिडियो बाग्लुङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले दलित समुदायलाई हिनताबोध हुने गरी जारी भएका नागरिकता सच्याउन सकिने बताएका छन। दलित समुदायलाई थप विभेद गर्ने नाम थर रहेका व्यक्तिहरुले सच्याउन चाहे प्रशासनले सच्याएर नागरिकता बनाई दिने क्षेत्रीले बताउँछन। हामीले त्यस्ता गाली गलौज गरी बनाईएको नागरिकताको नाम थर अन्य स्थानीयमा पनि पाईएकोले सच्चाई दिएका छौं, उहाँहरुले पनि सच्याउन चाहे हामी सच्याइ दिनेछौं।